စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေးစီးရီးစမတ်စုတစု 1. Shell ကလျှပ်စစ် actuator turn: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
AOX-မေးစီးရီးစမတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက် 3. ဖြုတ် drive ကိုဘုရ်ှလျှပ်စစ် actuator turn
ဘေးကင်းလုံခြုံ / Operating အပူချိန်ကျရှုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအသင်းတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ Outsourcing ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်အရည်အသွေး, အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အလို့ငှာဖြစ်သည်။ ဒါဟာလျှပ်စစ် actuator turn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးစမတ်စိတျအပိုငျး၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
နည်းပညာသုတေသနနှင့်အသစ်သော AOX-မေးစီးရီးစမတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလှည့်များအတွက်ကုမ္ပဏီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်။
မေး: သင် AOX-မေးစီးရီးစမတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်စတော့ရှယ်ယာများပါနဲ့လျှပ်စစ် actuator turn?
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-မေးစီးရီးစမတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မည်သည့်လက်မှတ်လျှပ်စစ် actuator turn ရှိပါသလား?
hot Tags:: စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်